ဟာသတိုများ - emokozin
စာအုပ်စင်‎ > ‎
Box ထဲက အနမ်း သုံးနှစ်အရွယ် သမီးလေးတစ်ယောက် လူကြီးတွေကို အသိမပေးဘဲ လက်ဆောင်ပစ္စည်းထုပ်တဲ့ ငွေရောင်စက္ကူ တစ်ချို့ကို ယူကစားမိတယ်။ အဖေက သိတော့ စိတ်ဆmိုးပြီး ကလေးကို အပြစ်ပေးတယ်။ ငွေရောင်စက္ကူကို ဘာလုပ်ပစ်လဲလို့ လိုက်စစ်မေးတော့ ကလေးငယ်က ဘူးထုပ်ဖို့ ယူသုံးမိကြောင်း ပြောခဲ့တယ်"
ကော်ပီတော်မောင်စိုင်းရဲ့ ...မျောရင်နစ်တဲ့ တိမ်
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~
ဝေးခဲ့ ပြီ…… အတိုးပေးပြီးငါကပိုက်ဆံချေးမလို့ …..သံဓိဏ္ဌာန်ချထားခဲ
့တာဘဲ…….ငါ မင်းဆီကများရမလားလို့ 
ငါကြည့် တဲ့ အပြာကားတွေ…ဗိုက်ပူမ က ငှားသွား….ငါ့ ရဲ့ အပြာရုပ်ရှင်တွေ
ကာတွန်းခွေ အဖြစ်နဲ့ပြန်ရ….ငါ့ အဖေ၀ယ်သိမ်းထားတဲ့ ဟာတွေ….အဖေသိရင်သေပါ
ဒီဒိုင်ရာရီကိုရေးသား….မင်နဲ့ ငါနဲ့ ပျော်ရွှင်မြူး…ဆပ်စလူးထ ပေါင်းလဲမနဲပါဘူး
မင်းလိုချင်တဲ့ ၂ လုံးဂဏန်း..ငါ့ ဘက်ကမပေးနှိုင်….ယုံကြည်စွာမျှော်လင့် ခဲ့ 
ငါတို့ နှစ်ယောက်တော့ မဝေးနိုင်…..ဘာကြောင့်ဒီနံပတ်ကမထွက်ရတာလဲ
ငါ့ ဦးနှောက်ကမတွေးနိုင်…ဒီနေ့ အထိမမေ့ နိုင်..ငါ ချဲထိုးဆဲပဲယနေ့ တိုင်
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါချမ်းလို့ တုန်
ဆိုးချက်ကရင်နင့် စရာ….တောင်ငူကိုသွားခဲ့ …ဆောင်ထူထူခြုံရင်းနဲ
မင်းအပေါင်းအသင်းတွေလာလာကြပ်တဲ့ …၂လုံးဂဏန်းတွေနဲ့ တင်ပြာရာခပ်ခဲ့ 
ဟိုအရင်ကတော့ ဒါဟာအမှတ်တမဲ့ ..ခုတော့ အပေါင်ဆိုင်ဆိုတာ ထဲငါဟာရောက်ခဲ့ 
တကယ်က…နှစ်လုံးသရေ...ဒိုင်နဲ့ ပေါင်းပြီးလောင်းတဲ့ အချိန်ကြတော့ 
ရဲကငါ့ ကိုဆွဲဆိ်..ထောင်ကျခဲ့့တာ၎နှစ်..ပျော်လို့ ထပ်ပီးနေတာ ၃နှစ်
အဖြစ်အပျက်တွေပြန်လည်တွေးရင်း..အိမ်ပြန်ခဲ့ ပါတော့ ကွာငါ့ အချစ်
မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ~~~~ ချဲတွက်နေ တညလုံး~~ ချဲမပေါက်တဲ့ ငါတော့ ရူး)
၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးရဲ့အောက်မှာ အမွဲဇယားကိုစတင်ခဲ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်~~သူပေးတဲ့ လက်စွပ်မောင်းကွင်းလေးကို
လမ်းထိပ်ကဒေါ်ကြွက်မဆ်ီမှာ သွားပေါင်ခဲ့ ~~~ဘယ်တော့ မှ ပြန်မရွေးနှိုင်ခဲ့ 
ဧပြီ၁၀ ရက်ကျွန်တော့်မွေးဂဏန်းလေးထွက်သွားတယ် အိုး....အို....အရူးအမူးပဲ
ပြန်ပေါက်လိုက် ပါသွားလိုက်နဲ့ အကြွေးနွံထဲနစ်ခဲ့
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါ ချမ်းလို့ တုန်
မှားယွင်းတဲ့ လမ်းတွေမှာ….ချဲထိုးတာ ငါပျော်ခဲ့ ~~~~ ချဲပေါက်ဖို
သိခဲ့ ရနောက်မှာလေ~~~~ အမှားများပြန်ပြင်တုန်းမှာ….အားလုံးနဲ့ ငါကဝေး
စိတ္တဇ ဟာသများ (၁)
စိတ္တဇ ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်တွေဟာ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့စဉ်းစာကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ 
ဟာစမ်း သပ်မှုတစ်ခု လုပ်ကြပါတယ်။ Video ပြစက်ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်ခုံတွေကိုဆေးသုတ် ပြီးတော့သူတိုကို Video ပြပါတယ်။ ဘယ်သူကများ ဆေးသုတ်တာကို သိမလဲ လို စမ်းသပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်
"ရှင် ထိုင်ခုံတွေမှာ ဆေးသုတ်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား , ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ"
မောင်ခွေးသည် အိမ်စာစာအုပ်ကို ဆရာမအားပေးလိုက်ရာ ဆရာမက
မောင်ခွေး၏ စာအုပ်ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီးနောက်
"ဟေ့ မောင်ခွေး။ ဒီဟာ မင်းရေးတာလား။ မင့်အဖေလက်ရေးနဲ့တူနေပါလား။
"သြော် ကျွန်တော်ရေးတာပါဆရာမ၊ နို့ပေမယ့် ဖေ့ဖေ့ဖောင်တိန်နဲ့ရေးလို့ ဖေ့ဖေ့
ဆရာမကရော ကျွန်တော့် အဖေ လက်ရေးမှန်း ဘယ်လိုသိလဲ မသိဘူးနော်...
ဒကာမ ။ ။ တပည့်တော်မက မွေးတာပါဘုရား။
အဲဒီလို အစဆွဲထုတ်ပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေတွေးတော့ …ကဲ ။ ဥပမာ နယူတန် ဆိုတဲ့သိပ်ပံ ပညာ ရှင်ကိုပဲကြည့် ။ ပန်းသီးတစ်လုံးပြုတ်ကျလာတာကို သူကဗိုက်ဝနေတော့ ပေါက်ကရတွေ တွေးပါလေ ရော ။ ဆာနေတဲ့လူသာဆို စားလိုက်မှာပေါ့ ။ နောက်ပြီး အမှန်ဆိုသူတွေးသင့်တာက ဒီနေ့ပန်းသီး ပေါက်ဈေး ဘယ်လောက်လဲ ။ ဒီပန်းသီးတွေခူးပြီး ဈေးမှာသာ ချရောင်းလိုက်ရ ၊ အရင်းမစိုက်ပဲ အမြတ်ကြီးပါပဲလား ဘာညာပေါ့ ။ ဒါမှမဟုတ် ငါဒီအပင်အောက်လာထိုင်တာကို အပင်စောင့်ရုက္ခစိုး ကမကြိုက်လို့လား ။ အရှင်ရုက္ခစိုးနတ်မင်းကြီးရယ် ကျွန်တော့်သားလေးကိုဗွေမယူပါနဲ့ ၊ ကျွန်တော့် မိန်းမကိုပဲ အတည်ယူပါ ၊ ကျွန်တော့်မှာ နောက်စမောလေး တွေ့နေပါပြီ ..ဘာညာပေါ့…။
ရိုက်ပစ်မှာ" လို့ ။ အဲဒီလိုဗျ ။ အမြဲ မကောင်းဘူး ။ ယောက္ခမကြီး ကိုရီးယား ကားကြည့်နေတုန်း အက်ဒီဆင် မလိုပါဘူးဗျာ ။ အလုပ်ကည ၈နာရီပြန်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် ၊ ကားမှတ်တိုင်ကနေ အိမ်ကို ၁၅ မိနစ်လောက် လျှောက်ရဦးမှာ၊ ကျန်းမာရေကလဲပေါ်လာပြီ ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အားနာ ရှက်ကလည်းရှက် ၊ အက်ဒီဆင် ကြီးကလည်းရှိနေတော့ သူ့ခမျာ ကွတတ ကြီးနဲ့ပဲ အိမ်ကို မအီမလည်ကြီးပြန်ခဲ့ ရပါလေရော ။ ခင်ဗျားဆိုရင်ကော အဲဒီလူနေရာမှာ အဲဒီ အက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့လူကြီးကို ကျေးဇူးတင်မှာလား ? ။ကဲ အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ၊ ပေါက်ကရတွေ မတွေးပါနဲ့လို့
မိခင်...။ နတ်မိမယ်ဆိုတာ အင်မတန်ချောမောလှပ ပြီး ကောင်းကင်မှာ ပျံနိုင်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးလိုပါပဲ သားရဲ့ ။
သားငယ်...။ မနေ့ က ဖေဖေ က ဟိုဘက်ခန်းမှာနေတဲ့ အန်တီရဲ့ တင်ပါးကိုပုတ်ပြီး မင်းဟာနတ်မိမယ် ပါပဲကွာ တဲ့...
" ကျွန်မ ယောင်္ကျားက မှာထားလို့ပါ။ သူခရီသွားနေတုန်း ညဘက် အပြင်ထွက်ရင် လူရမ်းကားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ခြေအိတ်အထက်ပိုင်းကို မထိစေနဲ့ဆိုလို့ "
" ဒါဆို တဆိတ် ကူညီစမ်းပါဗျာ။ ပွဲခင်းထဲမှာ ကျုပ်မိန်းမနဲ့ လူချင်းကွဲသွားလို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် အော်ပေးစမ်းပါ။သူက နားနည်းနည်းလေးတယ် "
မောင်ချစ် ။ ဟုတ်ဘူးကွ။ ငါ့သားက လေ့လာနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့သားကို သူတို့က လေ့လာပြီး စာသင်နေတာ။
(အရမ်းရီရလို့ ဟိုလိုစာသားလေးတွေ ပါပေမယ့် .. စိတ်ဝင်စားရင်ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့ နော်)
Doctor's Last Words
- "ဟင်း... အရမ်း ရင့်သီးတဲ့ စကားလုံးပဲကွယ့်... ဒါပေမဲ့ မင်းမှာ
- "ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ.. ဟိုတစ်ညကပေါ့... ကျမတို့ ကမ်းခြေတခုမှာ ကားရပ်ထားပြီး
- "ဒါလည်း မျိုးမစစ်လို့ မခေါ်ပါဘူးကွယ်.. မင်းနဲ့အနားမှာ
- အချိန်အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက်
- အပြင်ဘက်က လူနာတွေ့နဲ့ ဆေးခန်းဝန်ထမ်းတွေ ဆရာဝန်ရဲ့ စူးစူးဝါးဝါး
ယောက်ျားအပေါ် သစ္စာဖေါက်ရပုံအကြောင်းကို မိန်းမက ရှင်းပြနေသည်။
"ပိန်ချုံးပြီး ထမင်းဆာနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်၊ ကျွန်မ သူ့ကို သနားသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ သူ့ကို ရေချိုးခိုင်းပြီး အစာကျွေးလိုက်တယ်၊ အ၀တ်အစားလည်း ဆင်ပေးလိုက်တယ်။ သူက ကျေးဇူးတင် စကားပြောတယ်၊ တစ်ဆက်တည်းက အစ်မကြီးရဲ့ ယောက်ျား အသုံးမပြုတဲ့ ပစ္စည်းရှိသလားလို့ မေးတယ်။ အဲဒီမှာ ရှင်ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို အသုံးမပြုတာ ကြာပြီပဲလို့ သတိရလိုက်တယ်"
အလုပ်ရှင်က အတွင်းရေးမှူးမကို ပြောသည်။ ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကို
သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဗေဒင်ကိုယုံလား? ယုံတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရော..
သူငယ်ချင်းတို့ရေ... ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားကို သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့...
ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်... ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက်ကို
ဥမပါ... (အဲလေ..မှားလို့).. ဥပမာ.. သင်သည် ၁၂ ရက်နေ့တွင်မွေးပါက ၃
ဂဏန်းဇာတာရှင်ဖြစ်သည်။ (ဟဲဟဲ.. ဗေဒင်ဆရာလေသံနဲ့ပြောကြည့်တာ...)
ကဲ.. ကိုယ့်ရဲ့ ကံကြမ္မာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော် .. ငယ်ချင်းတို့... ဟဲဟဲ
ငါကြားနေရတယ် " ဟု မဲ့ကာရွဲ့ကာဖြင့် မာန်ပါပါပြောပါလေ။
လက်အောက်ငယ်သားများ၏ မလေးမခန့်လုပ်ခြင်းကို အောင့်သက်သက်ခံရတတ်သည်။
လိပ်ခေါင်းထွက်ခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း၊ လှုပ်မရခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။
ပညာရေး - လစ်လျှင်လစ်သလိုကြိုးစားပါ။
စီးပွားရေး - အလစ်သုတ်ခံရတတ်သည်။ ဈေးဝယ်လျှင် အလေးခိုးခံရတတ်သည်။
အချစ်ရေး - လေးလုံး(မျက်မှန်တပ်သူ) တစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်သည်။
မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမတစ်ဦး၏ လေးစားစွာဖြင့် ချစ်ခွင့်တောင်းခံရတတ်သည်။
ယတြာ - လစ်ပိုတစ်လုံးသောက်ပြီး လိပ်ဥ(၄၄)လုံးစားကာ
လေးထပ်တိုက်ပေါ်မှနေ၍ လေးဘက်ထောက်၍ " အားလုံးကို လေးစားပါတယ် " ဟု
အမြင့်ရောက်ကိန်းရှိသည် ( ဥပမာ- ငါးထပ်တိုက်ပေါ်)။
ပညာရေး - ငါးပါးသီလကို စနစ်တကျချိုးဖောက်သော ပညာရပ်ကိုတတ်မြောက်လိမ့်မည်။
စီးပွားရေး - ငါးစိမ်းသည်အလုပ်ဖြင့် အကျိုးပေးမည်။
အချစ်ရေး - ငှက်ဆိုးထိုးသံကဲ့သို့ အသံရှိသူနှင့်ဖူးစာဆုံတတ်သည်။
ငါးခူပြုံးပြုံးတတ်သူ ငါးဦး၏ အီစီကလီလုပ်ခြင်းကို ငါးရက်ခန့်
ယတြာ - ငါးကြော်ဝယ်စားပြီး ငါးယောက်မြောက်တွေ့သည့်ကောင်မလေးကို
ငါးမန်းအကြည့်ဖြင့်ကြည့်၍ "ကကြီးဖင်မှာ ပွေးတွေနဲ့၊ ခခွေးဖင်မှာ
ပွေးတွေနဲ့၊ " ဟူ၍ "က"မှ "င" အက္ခရာအထိဆိုပါ။ လက်တွေ့ဆိုကြည့်ပါ။
ခြောက်သွေ့စွာ အထီးကျန်ဖြစ်နေတတ်သည်။ ယောက်ျားစင်စစ်မှနေ၍
ပညာရေး - ခြုံးခြုံးကျလောက်အောင် ကြိုးစားပါ။ ချက်ချင်းအောင်မြင်မည်။
နတ်ကတော်သင်တန်း၊ အလှဖန်တီးရှင်သင်တန်းကိုတက်ရတတ်သည်။ ခြောက်လှန့်၍
စီးပွားရေး - စီးပွားရေးကံကောင်းနေပြီဖြစ်၍ ခြင်းတောင်းရက်ခြင်း၊
အူခြောက်လောက်အောင် အမြတ်ရရှိမည်။ အကောင်းများပြေပျောက်၍
အချစ်ရေး - ခြောက်နေသောချစ်သူနှင့် ခြောက်ရက်ကြာစကားများရတတ်သည်။
တက်မတတ်၊ ချက်မတတ်ငိုတတ်သူတစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံတတ်သည်။ ချစ်သူ၏
နာကျည်းမှုဖြင့် ခြောက်လုံးပြူးနှင့် အပစ်ခံရတတ်သည်။
ယတြာ - ချုံထဲတွင် ချိန်းတွေ့နေသာ ချစ်သူနှစ်ဦး၏ကြားထဲသို့
၆ကျပ်သားခန့် ရှိသော ချီးထုပ်ကိုပစ်ထည့်ပြီး "အချား.. အချား" ဟု အော်၍
အခွန်မဆောင်နိုင်သဖြင့် အဖမ်းခံရတတ်သည်။ မျက်ခွံဖွင့်မရခြင်း၊
ခွံ့ကျွေးမှစားနိုင်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခွက်လက်ဆွဲချင်စိတ်ပေါက်နေခြင်း၊
ခုနှစ်ရက်သားသမီး၏ သတ်ပစ်ချင်လောက်အောင် မေတ္တာထားခြင်းကို ခံရတတ်သည်။
ပညာရေး - ခိုးချမရဖြစ်တတ်သည်။ ခိုးကူးနေစဉ် အခန်းစောင့်ဆရာမမှ
လက်ပူးလက်ကြပ်မိတတ်သည်။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးကို ဒုက္ခပေးသော အတတ်ကိုရတတ်သည်။
အချစ်ရေး - ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တူတူ မွေးဖွားသူနှင့် ဖူးစာဆုံရမည်။
ချစ်သူ၏အနှစ်မပါသော အခွံစကားများကို ငြီးငွေ့လာမည်။ ခွက်ထိုးခွက်လန်
ရယ်တတ်သူတစ်ဦးကို တိတ်တခိုး ချစ်မိလာတတ်သည်။
ယတြာ - ခုံပေါ်တက်၍ ခါးတောင်းကို မြှေုာက်အောင်ကျိုက်ပြီး မယ်ဒလင်တီးကာ
အက်ဆစ်အဖွဲ့၏ အခန်း(၇) သင်ခန်းစာသီချင်းကို
ယခုနှစ်လုပ်သမျှ တလွဲဖြစ်လာမည်။ အသည်းရောင်ဘီပိုးစစ်၍ negativeပြရာ
၀မ်းသာနေစဉ် HIV positive ၀င်ကြောင်းသတင်းကြားရတတ်သည်။ ချစ်သူထံမှ
အဖြေရသည့်နေ့တွင် ကိုယ့်ချစ်သူကို မိမိထက်ပိုချစ်သူက ကားတင်ပြေးတတ်သည်။
ပညာရေး - ရှစ်ပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ ခဏခဏပြင်ဝတ်တတ်သော အကျင့်ရမည်။
စီးပွားရေး - ရှဉ့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ်ရတတ်သည်။
ခြေရှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တ၀ါများ(ဥပမာ-ဂဏန်း၊ ပင့်ကူ) စသည်တို့ကို
သိပ္ပံနည်းကျ မွေးမြူရင်း သန်းပေါင်းများစွာ(ဆံပင်ထဲတွင်) ချမ်းသာမည်။
အချစ်ရေး - အရှက်မရှိသူတစ်ဦး၏ ရှိခိုးကာ ချစ်ခွင့်တောင်းခံရတတ်သည်။
ယတြာ - ချစ်သူကို ဥသျှစ်သီးကျွေးပြီး ရှိခိုးကာ ရှက်ပြုံးပြုံး၍
"shit" ဟု ရက်ရက်စက်စက်အော်ပါ။
န၀င်းသမားများအဖို့ ယခုနှစ်ဂမ္ဘီရဆန်သော အဖြစ်အပျက်များနှင့်
ကြုံရတတ်သည်။ အထက်မှ ပုဂိုလ်များ(ထန်းတက်သမား၊ ပန်းရံ) တို့၏
လာရောက်ဆက်သွယ်မှုကိုခံယူရမည်။ ဓါတ်စီးသူကို ထိမိ၍ဓါတ်လိုက်သည်။
ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှ ဓါတ်မီးသီးသည် သင့်ခေါင်းပေါ်သို့ ဒုတ်ဒုတ်ထိကျတတ်သည်။
ပညာရေး - ကိုးကွယ်ရာမရှိဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲကျတတ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်း၍ ကံအကြောင်းမလှဖြစ်တတ်သည်။ ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်ရသော
စီးပွားရေး - ကုန်သမျှ ပြန်ရမည်။ ရသမျှ ပြန်ကုန်သည်။
အချစ်ရေး - ကွက်စိတ်ဆရာတစ်ဦးနှင့်
ယတြာ - ကိုကာကိုလာ သောက်နေသူတစ်ဦးကို ကတ္တရာစေးဖြင့်သုတ်၍
"ကိုးကွယ်ပါ၏" ဟုပြောကာ ကျောကုန်းကို ကုတ်ပေးပါ။
လူတစ်ယောက်ဟာ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အခန်းယူပြီး သူ့အခန်းထဲကို ၀င်တော့
အခန်းထဲမှာ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ သူအတော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဒီတော့
သူ့မိန်းမဆီကို လှမ်းပြီး သတင်းပို့မှပဲဆိုပြီး
အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ အီးမေးလ်လိပ်စာ
မှားရေးလိုက်တာကို သူကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ဘူး။ အဲဒီအီးမေးကို
အဲဒီအချိန် .... ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တစ်နေရာမှာ မုဆိုးမတစ်ယောက်ဟာ
သူ့ယောက်ျားရဲ့အသုဘ ပို့ရာကနေ ပြန်ရောက်လာပြီး သူ့ကွန်ပြူတာမှာ
အီးမေးလ်စစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေကြတဲ့
ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးစကားလေးတွေကြားရမလားလို့
အီးမေးလ်ကို စစ်လိုက်တယ်။ ခဏအကြာမှာ အောင်မလေး လို့အော်တဲ့အသံကြားရလို့
သူ့သားက အပြေးလေးဝင်လာတော့ အမေလုပ်တဲ့လူက ကြမ်းပြင်မှာ ပက်လက်လန်ပြီး
မေ့နေပြီ။ ဒါနဲ့ ကွန်ပြူတာကို ကြည့်လိုက်တော့ မော်နီတာ စကရင်မှာ ပေါ်နေတာက
“သို့ ... ချစ်ဇနီး
ဆရာ - မောင်ပု၊ မင်းအဖေ မှာ ပိုက်ဆံ ၁၀ ရှိတယ်။ မင်းက သူဆီက ၆ ကျပ် မုန်.ဖိုးတောင်းရင်။ မင်းအဖေ ဆီမှာ ဘယ်လောက်ကျန်မလဲ။
ဆရာ - မင်းဘာလို. ကျောင်းနောက်ကျတာလဲ။
တပည်. - ကျောင်းလမ်း ထိပ် က ဆိုင်းဘုတ် ကြောင်.ပါ ဆရာ။
ဆရာ - ဘာ ဆိုင်းဘုတ် တုန်း။
တပည်. - ကျောင်းရှိသည်၊ ဖြေးဖြေးမောင်း ဆိုတဲ.ဟာလေ။
ဆရာ - မာရီယာ ထွက်ခဲ.၊ ဟောဒီ ကမ္ဘာမြေပုံ ကနေ အမေရိကား တိုက်ကို ထောက်ပြစမ်း။
ဒေးဗစ် ဆိုသူသည် အအေးမိဝေဒနာတော်တော်လေး ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေရသဖြင့် မိသားစု ဆရာဝန်ထံ သွားပြသည်။ ဆရာဝန်က ဒေးဗစ်သောက်ရန်ဆေးလုံး တချို့ ပေးလိုက်သည်။ ဆေးသောက်ပြီးလည်း အကြောင်းမထူး၊ ရောဂါမသက်သာ။
အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်ထံ နောက်တခေါက် သွားပြသည်။ သည်တခေါက်တွင်မူ ဒေးဗစ်အား ဆရာဝန်က ဆေးတလုံး ထိုးလွှတ်လိုက်သည်။ ဒါလည်း အကြောင်းမထူး၊ ရောဂါ မသက်သာ။
သို့နှင့် ဆရာဝန် ထံနောက်တခေါက်သွားပြန်ပြသည်။ ယင်းတတိယ အခေါက်တွင် ခေါင်းကုတ်ချင်ချင်ဖြစ်သွားသော ဆရာဝန်က ဆေးလည်းမပေး၊ ဆေးလည်း မထိုးတော့၊ အိမ်ပြန်လွှတ်သည်။
“ကဲ ဒေးဗစ်ရေ၊ ခင်ဗျား အိမ်ပြန်ပြီး ရေခပ်နွေးနွေးလေး စပ်ပြီး ရေချိုးပစ်ဗျာ၊ ပြီးရင် ရေစိုအတိုင်း ပြတင်းပေါက်ဝမှာ ကိုယ်တုံးလုံး ထွက်ရပ်ဗျာ၊ တ၀ကြီးလေတိုက်ခံဗျာ၊ ကဲသွားပေတော့”
“ ဟာ ဒေါက်တာကလည်း၊ ဒါဆို ကျွန်တော် နျူမိုးနီးယား (အဆုတ်ရောင်ရောဂါ) ဖြစ်ရောပေါ့ ဒေါက်တာရဲ့”
နျူမိုးနီးယားရောဂါသံလည်း ကြားရော ပဟေဠိ အဖြေညှိလိုက်နိုင်သူပမာ ဆရာဝန် မျက်နှာ ၀င်းလက်သွားသည်။
“အဲ ဟုတ်ပြီ၊ နျူမိုးနီးယား၊ နျူမိုးနီးယားဖြစ်ပြီနော်၊ ပြန်လာခဲ့၊ ကျုပ်ကုပေးမယ်၊ ပျောက်စေရမယ်၊ အာမခံတယ်”
သေဆုံးသူအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ခမျာ ငရဲသို့ မှားပို့ခံခဲ့ရရှာသည်။ အလိုလေး ငရဲဆိုတာ နာမည်နှင့်လိုက်အောင်လည်း အနေဆင်းရဲ၊ အစားဆင်းရဲ၊ အသွားအလာ ဆင်းရဲ နှင့် တစ်ဆိတ်မှ မနိပ်ပါလား ဟု ညည်းတွားမိသွားသည်။ သို့ဖြင့် တတ်သည့်ပညာမနေသာ ဆိုသလို ငရဲပြည်ရောက် အင်ဂျင်နီယာ က အင်ဂျင်နီယာအစွမ်းပြတော့သည်။ ငရဲပြည်တ၀ှမ်း အဲယာကွန်းတွေ၊ ဓါတ်လှေကားတွေ၊ စက်လှေကားတွေ၊ ရေဆွဲအိမ်သာတွေက အစ ခေတ်အမီဆုံးဇိမ်ခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေတသီကြီး တပ်ဆင်ပေးလိုက်သည်။ ငရဲတပြည်ထောင်လုံးလည်း နေရ ထိုင်ရ အဆင်ပြေပြေနှင့် သက်သောင့်သက်သာ ရှိသွားလေသည်။
တစ်နေ့ကျတော့ ကောင်းကင်ဘုံသားတို့၏ အဖဘုရားသခင်က အပယ်ဘုံ ငရဲသားတို့၏ အကြီးအကဲ ဆေတန် (မာရ်နတ်) ထံ ဖုန်းဆက်၍ အပယ်ဘုံသားတို့၏ တိုင်းရေးပြည်ရေးအခြေအနေကို မေးခြင်းစူးစမ်းတော်မူလေသည်။
“ ဟာ ဒိတ်ပဲ၊ ဂရိတ်ပါပဲ အဖဘုရားသခင်၊ တပည့်တော်တို့ ယောယုဝ တစ်ပြည်ထောင်လုံးလည်း အပယ်ကျလာတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တယောက်ရဲ့ကောင်းမှုနှင့် အရာရာတိုင်း ပြောင်းလဲ ကြီးပွားတိုးတက်နေကြောင်းပါကိုယ်တော်အရှင်”
မာရ်နတ်၏ ပြန်လည်လျှောက်တင်ချက်လည်း နားဆင်တော်မူပြီးရော ဘုရားသခင် ကြုံးဝါးတော် မူတော့သည်။
“သယ် အသင် မာရ်နတ်၊ အဲဒီ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာက ဘာကိစ္စ ဘာအကြောင်းကြောင့် မောင်မင်းတို့ဆီ ရောက်နေတာတုံး၊ အဲဒီ အင်ဂျင်နီယာကို သူရှိအပ်ရ မယ့် အရပ် ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ ကောင်းကင်ဘုံကို အခု ချက်ချင်းပို့လွှတ်စေ၊ ပို့လွှတ်မပေးလို့ကတော့ မောင်မင်းကို ငါတရားစွဲပြီမှတ်” ဟု ဘုရားသခင် ကြုံးဝါးသံကို မာရ်နတ်မင်းက မထီသည့် အသွင်နှင့် ပြန်လျှောက်တင်သည်။
“တကယ်ပဲ တရားစွဲတော်မူတော့မှာ လား ဘုရား၊ ကိုယ်တော်တို့ဆီမှာ ရှေ့နေ ဘယ်မှာ သွားရှာမှာတုံး၊ စဉ်းစားတော်မူပါဦး”
ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုမှာ အင်မတန်လှပတဲ့ မိန်းမချောတစ်ဦးကိုတွေ့ လိုက်ပြီဆိုပါတော့။ သူ့ ဆီတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီး “ကျွန်တော်က အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့သူဌေးပါ။ကျွန်တော့်ကို လက်ထက်မလား” လို့ မေးရင် အဲဒါ Direct Marketing ။ တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်တင်တာပေါ့။
ပါတီမှာ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ပျော်နေကြတုန်းမှာ အင်မတန်လှပတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ တယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အဲဒီကလေးမဆီ လျှောက်သွားပြီး ခင်ဗျားကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်။
“သူက သိပ်ချမ်းသာတာ၊ သူ့ ကိုကြိုက်လိုက်ပါလား” လို့ ပြောရင် အဲဒါ Advertising ။ ကြော်ငြာသဘောတရား။
ပါတီမှာ မိန်းမချောလေးကိုတွေ့ လို့ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် တောင်းထားလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ ကျတော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီး “ ကျွန်တော်ကသိပ်ချမ်းသာတဲ့လူပါ။ ကျွန်တော်ကို လက်ထက်မလား” လို့ မေးရင် အဲဒါ Telemarketing ။
ပါတီမှာ ကောင်မလေးကိုတွေ့ တယ်။ စကားရောဖောရောတွေလုပ်ပြီးအချိူရည်ယူပေး၊ စားစရာယူပေးတွေ လုပ်တယ်။ပြန်မယ်ဆိုတော့ ကားအထိလိုက်ပို့ ပေးပြီး တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့မှ စကားကြီးသုံးခွန်းပြောတယ်။ အဲဒါ Public Relation ။ ပြန် /ဆက်ပေါ့။
ပါတီမှာ ကောင်းမလေးက ခင်ဗျားဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ် ရောက်လာပြီး “ ရှင်က သိပ်ချမ်းသာတယ်ဆို၊ ကျွန်မကို လက်ထက်ပါလားဟင်” လို့ မေးရင်အဲဒါ Brand Recognition။ ဈေးကွက်မှာ ပစ္စည်းပေါက်သွားတာ။
ပါတီမှာ ကောင်းမလေကိုတွေ့ တယ်။ သူ့ ဆီသွားပြီး “ ကိုယ်ကသူဌေးလေးပါ။ ကိုယ့်ကိုလက်ထက်ပါလား” လို့ပြောတယ်။ကောင်းမလေးက လှည့်ကြည့်ပြီး ပါးကြီးကို အားရပါးရ ထိထိမိမိ တွယ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲဒါ Customer Feedback ။ စားသုံးသူရဲ့ သဘောထား။
ပါတီမှာ တွေ့ တဲ့ကောင်းမလေးကို ခင်ဗျားက ချဉ်းကပ်ပြီး သုံးခွန်းသောစကားပြောတယ်။ သူက “အတော်ပဲ ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်” ဆိုပြီး သူ့ ဘေးကဘဲကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒါ Demand and Supply Gap ။ ၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအားကွာဟမှု။
ပါတီမှာ ကောင်းမလေးတွေ့ လို့ ချဉ်းကပ်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေတုန်းတစ်ယောက်က၀င်လာပြီး “ကိုကိုကသူဌေး၊လက်ထက်ကြရအောင် နော် ” လို့ ဖြတ်ခုတ်သွားရင်အဲဒါ Competition, Eating into your market share ။ ဈေးကွက်အလုခံတာ။
ပါတီမှာကောင်းမလေတွေ့ လို့ချဉ်းကပ်လမ်းဖောက်နေတုန်း အိမ်ကဟာမကြီးပေါ်လာပြီး “မောင်ရေ” လို့အသံပေးလိုက်တယ်။အဲဒါ Market Restriction ။
သူတို့ဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် ပြောဆိုဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကြပါ
တစ်နေ့တွင် မောင်အိုဘယ် သည် အထုပ်အပိုးများ မနိုင်မနင်းဆွဲ၍ အိမ်ပြန်လာသည်ကိုတွေ့သဖြင့် သူငယ်ချင်းများက ၀ိုင်းမေးကြသည်။
" ဟေ့ကောင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွ အထုတ်အပိုးတွေမနိုင်မနင်းနဲ့ "
" ငါ့ရှေ့ကိုကွာ အထုပ်အပိုးတွေမနိုင်မနင်းနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ အထုပ်အပိုးတွေကိုပစ်ချတယ်။ နောက်
သူ့အကျီ င်္ကိုဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး ကဲ ရှင်ကြိုက်တာယူဆိုပြီးပြောပါရောကွာ။ ဒီလိုမှမလုပ်ရင် သူ့ကိုယ်သူသတ်သေမယ်တဲ့ "
" ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ဒီတော့မင်းဘာလုပ်လိုက်လဲပြောပါဦးကွာ "
သူငယ်ချင်းများ၏စကားကြားသော် အိုဘယ်က အလွန်စိတ်ပျက်သည့်ပုံစံဖြင့် " ဒီတော့အထုပ်အပိုးတွေပဲ ယူလာရတာပေါ့ကွာ။
သူ့အကျီ င်္တွေက ပြဲသွားပြီဆိုတော့ ဘာလုပ်ရတော့မှာလဲ "
သူငယ်ချင်းများ " သြော် "
တစ်လမ်းထဲနေ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးတွေ့ဆုံခိုက် ခုလိုစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။
သန့်ဇင် ။ ။ သယ်ရင်းတို့ လင်မယား မနေ့ညက ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆို၊ ဘယ်လိုပြီးသွားကြလဲ။
ကိုကိုဂျစ်။ ။ " ဟဲ ဟဲ ဘာဖြစ်ရမလဲ သန့်ဇင်ရ ၊ နောက်ဆုံးတော့ ဒီမိန်းမပဲ ငါရှိရာကို လေးဖက်ထောက်ပြီး ရောက်လာရတာပေါ့ ဟား ဟ "
သန့်ဇင် ။ ။ " တယ်ဟုတ်ပါလား ၊ ပြီးတော့ မင်း မိန်းမက ဘာပြောသေးလဲဟင် "
ကိုကိုဂျစ်။ ။ " ဒီမိန်းမကလား ဟား ဟ ကိုဂျစ် ခုချက်ချင်း ခုတင်အောက်က ထွက်ခဲ့စမ်း တဲ့လေ "
သန့်ဇင် ။ ။ သြော် အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးလေးတွေလည်း ရှိတယ်နော်
No.1 . .စိတ်တိုခြင်းသီအိုရီ. .
ပါမောက္ခ ကသင်တန်းပို့ချနေသည် ။
"လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်တိုမှု ဒီဂရီ (အဆင့်) ၃ မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ် ၊ ဒီအဆိုပြုချက်ကို ပိုပြီးရှင်းသွားအောင် ဆရာပြမယ် ၊ တယ်လီဖုန်း ကို
ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး ကြိုက် ရာနံပါတ် ၁ခုကို လှည့်လိုက် ၊ တဖက်က ကောက်ကိုင်တဲ့အခါမှာ 'ပီတာရှိလား' လို့မေးလိုက်မယ် ၊ 'ပီတာ ဆိုတာ
ဒီ အိမ်မှာ မရှိဘူးလို့' ဟိုကဖြေမယ် ၊ဒီနံပါတ်ကိုပဲ နောက်တခါ ပြန်လှည့်ပြီး ' ပီတာကို ကျေးဇူးပြု ပြီးခေါ်ပေးပါ' လို့ ပြောလိုက်မယ် ၊တဖက်က
'ဒီမှာပီတာဆိုတာ မရှိဘူး၊ ဖုန်းမှားနေပြီ 'လို့ဖြေမယ် ၊ နောက်တကြိမ် ဒီနံပါတ်ကို ပဲ လှည့်ပြီး 'ပီတာ ပြန်လာပြီလား ' လို့မေးမယ် ၊ ဟိုဖက်က
'ဘယ်ကပီတာ ကိုလာမေးနေတာလဲ ' ဆိုပြီးဖုန်းကိုချသွားမယ် ၊ ကိုင်း သဘောပေါက်ကြတယ် မဟုတ်လား"
ကျောင်းသား တစ်ယောက် နေရာကထပြီး ပြောသည် ။
"စိတ်တိုတဲ့ စတုတ္ထ ဒီဂရီ ရှိသေးတယ် ဆရာ "
ခုန နံပါတ်ကို ပဲပြန်လှည့်ပြီး 'ဟဲ လို..ကျွန်တော် ပီတာပါ၊ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ ဖုန်းမဆက်ဘူးလားဟင် ' လို့မေးလိုက်မယ် "
No.2. .မထူးပါဘူး. .
" အားလုံးကို ငရဲပြည်ပို့လိုက် ၊ ဟို ဆွံ့အ နားမကြားကိုပါပို့လိုက် "
No.3 . .ချွေတာရေး
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ ၊၀င်္ကပါများဖြင့်ရှုတ်ထွေးလှသောရှေ့ဟောင်းရဲတိုက်ကြီးကို လမ်းပြက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် များအားလိုက်ပြသည် ၊
မြေအောက်တနေရာတွင် လူအရိုးစုများတွေ့သဖြင့် ဧသည့်များက မေးသည် ။
"ဟိုအရင် ခေတ်က ကျန်ခဲ့တဲ့ လူရိုးတွေလားဟင် "
"မဟုတ်ဘူး ၊ လမ်းပြငှားရမှာကိုတွန့်တိုတဲ့လူတွေရဲ့အရိုး "
No.74. .တာဝန်အရ အသိပေးရမယ်. .
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည် ၊အရာရှိကြီးတစ်ဦးသည် မိမိ၏အတွင်းရေးမှူးမနှင့် ကားအတူစီးလာသည် ၊ လမ်းတွင်ကားပျက်သွားသည် ၊
"အရာရှိ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကားပြင်ဌာနကို ဖုံးဆက်အကူအညီ တောင်းသင့်တယ် ၊ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပျက်တဲ့ဥစ္စာကို ငါကိုယ်တိုင်ပြင်သင့်တယ် "
ဤသို့စဉ်းစားပြီး ကားထဲမှ ထွက်သည် ၊ကုတ်အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီး ကားအောက်သို့ဝင်သည် ။အတွင်းရေးမှူးမကစဉ်းစားသည် ၊
"မိန်းမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါကားပေါ်မှာပဲ ထိုင်နေသင့်တယ် ၊ ဒါပေမဲ့ အတွင်းရေမှူးမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့် အထက်အရာရှိရဲ့ ဘေး မှာ နေရမယ် "
သို့ဖြင့်သူမကားအောက်ဝင်သည် ၊ မကြာမီ ယာဉ်ထိန်းရဲ၏ ကားဖြတ်မောင်းလာသည် ၊ယာဉ်ထိန်းရဲကစဉ်းစားသည် ၊
"ပြင်သစ်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော ယောကျာ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ငါဖြတ်မောင်းသွားသင့်တယ် ၊ဒါပေမဲ့ ရဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတို့ကားကိုခိုးသွားတာကြာပြီလို့ ငါပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ် "
No.5. .အလှူခံ. .
ရေကူးကန်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် အလှူငွေကောက်ခံသူများရောက်လာရာ ယောကျာ်းလုပ်သူက မိန်းမကို လှမ်းအော်ပြီးမေးသည် ။
No.76. .ဒါလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ. .
"ကြည့်လေ ၊ နယ်ကိုတာဝန်နဲ့ ငါခရီးထွက်တယ် ၊တာဝန်ပြီးဆုံးတော့ ဘယ်နေ့ပြန်ရောက်မယ် ဆိုတာကိုကြေးနန်းနဲ့အကြောင်း ကြားလိုက်တယ် ၊ အဲ ငါ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ့ကိုတခြားယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ် "
"သစ္စာမဲ့တယ်လို့ မုချကြီးတော့စွတ်စွဲလို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ် ၊ သူ့ခမျာ ကြေးနန်းကိုမရတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ "
No.77. .မသ်ိသေးဘူး. .
ပင်လယ်ကမ်းစပ် အနားယူ စခန်းသို့ရောက်လာသော လူငယ်က လူတစ်ဦးကိုမေးသည် ။
"ဒီနားမှာ အိမ်သာ ရှိသလားခင်ဗျာ "
"မသိဘူးဗျ ၊ ကျွန်တော်လည်း ဒီကိုရောက်တာ အခုမှ (၄) ရက်ပဲရှိသေးတယ် "
No.78. .ပိုက်ဆံတောင်းနည်း. .
"ယောကျာ်းတွေဟာ အင်မတန် ဥာဏ်နဲတယ် ၊ အိုင်ပိုက်ဆံလိုလာတဲ့အခါတိုင်း ရမယ်ရှာပြီး သူ့ကိုရန်လုပ်တယ် ၊အမေ့အိမ်ပြန်မယ် ဆိုပြီး
"ထိရောက်မှုရှိ ရဲ့လား "
"ရှိတာပေါ့ ၊ အမေ့ဆီသွားဖို့ဆိုပြီး သူလက်မှတ်ဖိုး ထုတ်ပေးတယ်လေ "
No.79. .ဖိနပ်သူခိုး. .
"အဓိပါယ် မရှိတာတွေလာပြောမနေပါနဲ့ဗျာ ၊ ဖိနပ်စီးပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခွေးဟာ တစ်ခါမှ အိမ်ပြန် မလာဖူး ဘူး "
No.80. .ငယ်ငယ်ကပုံ. .
ငယ်ငယ်ကပုံများကို အိမ်ရှင်မက မိမိ၏သူငယ်ချင်းများအားပြသည် ၊ မိန်းမကြီးတစ်ဦး၏ပေါင်ပေါ် တွင်ကလေးမလေးတစ်ယောက် ထိုင်နေသော ပုံ ဖြစ်သည် ။
"လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ -တုန်းက ကျွန်မရဲ့ပုံလေ "
"ဒီကလေးမလေး က ဘယ်သူလဲ ဟင် "
No.81. .အော်ဒက်ဆာသား . .
ယူကရိန်းနိုင်ငံ အော်ဒက်ဆာမြို့သားတစ်ယောက်သည် ငါးဝယ်ရန် ငါးဆိုင်ထဲ ၀င်လာသည် ၊ အရောင်းသမ ကိုမေးသည် ။
"ခင်ဗျားတို့ဆိုင်က ငါးဟာ အရှင်လား "
"အရှင်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ သူ မလှုပ်မရှား ဖြစ်နေတာလဲ "
"သြော် ဒါလား ၊ ငါးအိပ်နေတယ်လေ "
"အိပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အနံ့ဆိုးထွက်နေပါလား "
"ရှင် ကတ်တီးကတ်ဖဲ့ မပြောနဲ့ ၊ ရှင်အိပ်နေတုန်း ပါးစပ်ကအာပုတ်ရည် ထွက်တာကိုထိန်းနိုင်လို့လား ၊ ပြောစမ်းပါ "
No.82. .ဒါတော့သည်းမခံနိုင်ဘူး. .
"ခင်ဗျား မိန်းမနဲ့ကွာရှင်းတော့မယ်လို့ သတင်းကြားတယ် ၊ဘာဖြစ်လို့လဲ "
"ဟာ. . ဒါနဲ့များ ကွာရှင်းရမယ်တဲ့ဗျာ၊ မဟုတ်သေးပါဘူး"
"ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကျုပ်နားရွက်ကို ဒီကောင်မက ဆေးလိပ်ပြာခွက်အဖြစ်နဲ့ အသုံးပြုတယ်ဗျာ"
No.83. . အကြောင်းရင်း. .
"ပီတာ...မင်းဘာဖြစ်လို့ ကျောင်းနောက်ကျ ရတာလဲ"
"ကျွန်တော် ငါးသွားမျှားမလို့ဥစ္စာ ဖေဖေကခွင့်မပြုလို့ "
"မင်းအဖေ မှန်တာပေါ့ ၊ ဒါနဲ့ဘာကြောင့် ကျောင်းမပျက်သင့်ဘူးလဲ ဆိုတာကို မင်းအဖေက ရှင်းပြတယ် မဟုတ်လား "
"ဟင့်အင်း ၊ ရှိတဲ့ တီကောင်က တို့နှစ်ယောက်စာ မလောက်ဘူး လို့ပဲ ပြောပါတယ် "
No.84. .ကံကောင်းတယ်. .
"ဒါနဲ့ ခင်ဗျားပြောတော့ သွားလေရာမှာ ခြောက်လုံးပြူးကို ခင်ဗျားအမြဲ ဆောင်သွားလေ့ရှိတယ်ဆို "
"မှန်ပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းချင်တော့ ခြောက်လုံးပြူးကို လုတဲ့အကောင်တွေက တွေ့မသွားဘူးဗျ "
No.85. .ဘာကောင်လဲ. .
"ချာတိတ်. . .မင်းဘာဖြစ်လို့ ငိုနေရတာလဲကွ "
"မေမေက ဖေဖေ့ကို ဆင်ရိုင်းကြီးလို့ပြောတယ် ၊ ဖေဖေက မေမေ့ကို ကြက်မကြီးလို့ ပြန်ပြောတယ်"
"အဲဒါနဲ့ ငိုရရောလား ကလေးရဲ့"
"စဉ်းစားကြည့်လေ ၊ ကျွန်တော် ဘာကောင်ဖြစ်မလဲ "
No.86. .လျစ်လျူ ရှု. .
"ဒေါက်တာ....ကျွန်တော့်ကို လူတကာကလျစ်လျူ ရှုနေကြတယ် ခင်ဗျ "
No.87. .တယောဆရာ. .
လူနာကိုခွဲစိတ် ရန်အတွက် အားလုံး အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည် ၊ လူနာက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို မေးသည် ။
"ဒေါက်တာ....ကျွန်တော့် အူအတက်ကို ဖြတ်ပြီးရင် ကျွန်တော် တယော ထိုးနိူင်မလား ခင်ဗျာ"
"ဟန်ကျတာပဲ ၊ကျွန်တော် တယော တစ်ခါမှမထိုးဖူးသေးဘူး ၊အခုထိုးနိုင်တော့မယ် တဲ့ "
No.88. .ရှက်တော့ရှက်သား. .
"ဒေါက်တာရယ်. .ပြောရမှာရှက်တော့ရှက်ပါရဲ့ ၊ ကျွန်တော်လေလည်တဲ့ အခါ လေလည်သံကို မကြားရဘူး ၊ ကူညီပါဦး "
"ဒီဆေးပြားတွေ ယူသွား ၊ တစ်နေ့သုံးခါစား "
"ဒီဆေးစားရင် ကျွန်တော် ပိုကြားရမလား ခင်ဗျာ "
"ဟင့်အင်း ၊ လေလည်သံ ပိုကျယ်လာမယ်"
No.89. .ငါမရူးဘူး. .
စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည် ၊ဆေးကော်မရှင်က လူနာတို့၏ အခြေအနေကိုအောက်ပါအတိုင်းစမ်းသပ်သည် ၊
လူနာများကို ငါးမျှားတံတစ်ချောင်းစီပေးကာ ရေဆွဲ အိမ်သာတစ်ခုစီ၏ ရှေ့တွင်ထိုင်ခိုင်းသည် ။ထို့နောက် တစ်ယောက်စီ ထံသွားကာ
"ငါး တွတ်ရဲ့လား" ဟု မေးသည် ၊လူနာအားလုံးလိုလိုက ငါးတွတ်ကြောင်း ဖြေသည် ၊ တစ်ဦးကသာငါးမတွတ်ပါ ဟုပြောသည် ၊ ဆေးကော်မရှင်
အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးထိုင်ကာ နောက်ဆုံးလူနာတစ်ယောက်သာ လူကောင်း ကဲ့သို့ဖြေသည်ဟု သဘောတူညီကြသည် ၊သို့ဖြင့်၎င်းအား
ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည် ၊ထိုလူနာ ဆေးရုံမှ မဆင်းခင်လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြသော လူနာ အဖော်များက ၎င်းအားမေးကြသည်၊
"ဟေ့ ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ငါးမတွတ်ဘူးလို့ ဖြေရတာလဲ"
"ငါး တွတ်တဲ့နေရာကို သူတို့ကိုပြောပြရအောင် ကျုပ် အရူးမှ မဟုတ်ဘဲ"
No.90. .လိုချင်လို့. .
"မေမေ ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ် ပျောက်သွားလို့"
"အဲဒါနဲ့ မင်းကျောင်းနောက်ကျတာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း"
"အဲဒီ တစ်ကျပ်တန် ပေါ်မှာ ကျွန်တော် ရပ်နေလို့"
No.91. .အတွေးကိုယ်စီရှိကြသည်. .
လေယာဉ်ပျက်ကျသဖြင့် ယောကျာ်းခရီးသည်များနှင့် မိန်းမခရီးသည်များ မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီသို့ ရောက်သွားကြသည် ။ မိန်းမခရီးသည်များနှင့် မည်သို့ပူးပေါင်းနိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ကို ယောကျာ်းများ တိုင်ပင်ကြသည် ။
"ဟိုဖက်ကမ်း ကိုမြန်မြန်လေး ရေကူးသွား ကြရအောင်" အသက် ၂၀-အရွယ် လူငယ်ကအားတက်သရောပြောသည် ၊
"လှေတစ်ခုလုပ်ပြီး ကူးသွားရင် ပိုကောင်းမယ်" အသက် ၃၀-အရွယ်ကပြောသည် ။
"ဘယ်ကိုမှ ကူးစရာ မလိုဘူး ၊သူတို့ဟာသူတို့ ကူးလာကြလိမ့်မယ်" အသက် ၅၀-အရွယ်ကပြောသည် ။
No.92. .မဟုတ်တဲ့နေရာကြီးနေတယ်. .
မင်္ဂလာဦးညလွန်မြောက်ပြီး နောက်တနေ့တွင် ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံတို့ ယောကျာ်းအတွက် ဖိနပ်ဝယ်ရန် ဈေးထွက်ကြသည် ၊ ဖိနပ်ဆိုင်တွင်
အရောင်းသမက နံပါတ် ၄၅-ကိုယူလာသည် ၊လူငယ်စီးကြည့်သည် ၊အလွန်ငယ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည် ၊သို့ဖြင့် နံပါတ်-၄၆ ၊ထို့နောက် အကြီး ဆုံးနံပါတ် ၄၇-ကိုယူပြီးပြသည် ၊ လူငယ်စီးကြည့်သည် ၊ခြေထောက်က ကြီးပြီး ဖိနပ်က ငယ်နေသည် ။
" ကျွန်မတို့ ဆိုင်မှာ ဒီထက် ကြီးတဲ့ နံပါတ် မရှိတော့ဘူး ရှင့် "
ဆိုင်မှ ထွက်လာသောအခါ ဇနီး ဖြစ်သူက ၀မ်းနည်းသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး ၊ ရှင့်ခြေထောက်တွေက ကြီးလွန်းတာကိုး "
"အေးကွာ .....မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါက တောသားကွ ၊ တစ်နွေလုံးငါက ဖိနပ်မပါဘဲ လမ်းလျှောက်တော့ ခြေထောက်တွေက တဖြေးဖြေး ကြီး
လာတာနဲ့ တူပါရဲ့ကွာ "
"ရှင် ဘောင်းဘီမ၀တ် ဘဲ လျှောက်ရင်ပိုတောင် ကောင်းလိမ့်ဦးမယ်"
No.93. .မိန်းမပျောက်လို့. .
ကိုချူချာတို့ လင်မယား မော်စကိုသို့ရောက်လာသည် ၊ဆိုင်ကြီးများကိုငေးမောကြည့်ရင်းလူအုပ်ကြားထဲတွင် မချူချာ ပျောက်သွားသည် ။
ကိုချူချာက ရဲစခန်းသို့ လာတိုင်သည် ။
"ကျွန်တော့်မိန်းမ ပျောက်သွား ပါတယ်"
"ခင်ဗျား မိန်းမ ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကိုပြောပြပါ"
"ပုံပန်းသဏ္ဍန် မပျောက်ဘူး ၊ မိန်းမပျောက်သွားတယ်"
"ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျား သဘောမပေါက်ဘူး ထင်တယ် ၊ခင်ဗျားမိန်းမ အသားဖြူသလား ,မဲသလား ၊အရပ်ပုသလား , ရှည်သလား ဆိုတာ
ကို ပြောတာ ၊ဒါမှ ရှာရတာလွယ်မှာပေါ့ ၊ ဥပမာ-ကျုပ်မိန်းမ ကိုကြည့် ၊အရပ်ထောင်ထောင် မောင်းမောင်း ၊ မ၀,မပိန် ကိုယ်လုံးနဲ့ ၊
ရွှေရောင်ဆံပင်နဲ့ ၊ ခြေတန်လည်း ရှည်တယ် " ကိုချူချာ ခဏစဉ်းစားပြီးပြောသည် ။
"ကျွန်တော့် မိန်းမ အရပ်ပုတယ် ၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်စွေနေတယ် ၊ခြေခွင်လဲ လိမ်နေတယ် ၊အင်း. .ကျွန်တော့် မိန်းမ ကို ထား လိုက်ပါ ဗျာ ၊
ရဲ မှူး ကြီးရဲ့ မိန်းမ ကို ပဲရှာကြရအောင် "
No.94. . မျက်စိမှုန်တဲ့ယုန်. .
၀က်ဝံ, မြေခွေးနှင့် ယုန်တို့ အထွေထွေ စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ အရ စစ်မှုထမ်းချိ်န်ရောက်သဖြင့် စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးသို့ သွားကြသည် ၊
ဆေးကော်မရှင် က ၎င်းတို့တစ်ဦးချင်းကို ဆေးစစ်သည် ၊ ၀က်ဝံ နှင့်မြေခွေးတို့ နှစ်ဦးစလုံး ဆေးအောင်ကြသည် ၊နှစ်ဦးစလုံး သုန်သုန် မှုန်မှုန်
အမူအရာနှင့် ထိုင်နေကြသည် ၊မည်သူမှ စစ်မှု မထမ်းလိုကြသောကြောင့် ဖြစ်သည် ၊ ဤ အချိန်တွင် ၀မ်းသာသောမျက်နှာဖြင့်
အခန်းထဲမှ ယုန်ထွက်လာ သည် ။
"၀မ်းသာလိုက်တာ ၊ငါ စစ်မှုထမ်းစရာမလိုဘူး ၊ ငါဆေးမအောင်ဘူး"
"ဘာဖြစ်လို့ မအောင်ရမှာလဲ ၊မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ငါတို့သိသားပဲ "
"ဟို အဝေးကတောင် ကုန်းကိုမြင်သလား"
"ဘယ်ဘက်ထောင့်က ကျွန်းကပင် ကြီးကိုကောမြင်ကြရဲ့လား"
"အောက်ဘက်ကိုစိုက် ကျနေတဲ့ အရွက်နှစ်ရွက်ကို ရော"
"အဲဒါပြောတာပေါ့ ၊ ငါက ကျွန်းပင်ကြီးကိုတောင်မမြင် ဘူး"
No.95. .နောက်မလုပ်နဲ့. .
ယောကျာ်းဖြစ်သူ မူးပြီး အိမ်ပြန်လာသည် ။အိတ်ထောင်ထဲတွင် သုံးရူဘယ် ကျန်နေသည် ၊ မနက်အိပ်ရာထသောအခါ အရက်နာကျသည် ကို
ဖြေဖျောက်ရန် အတွက်အိတ်ထောင်ကို စမ်းသည် ၊မနေ့ကသုံးရူဘယ် မရှိတော့ချေ ။ သို့နှင့်အိမ်တွင် မွေးထားသောငန်းကိုယူကာ ဈေးထဲသွား
ရောင်းသည် ။ညနေ ပိုင်းတွင် မူးပြီးအိမ်ပြန်လာသည် ၊ မိန်းမ ကမေးသည် ။
"နွေးတဲ့အရပ် ဘက်ကိုပျံသွားလေရဲ့ ၊ငါ့အိတ်ထောင်ကို မင်းခုလိုပဲဆက်စမ်းနေရင် မွေးထားတဲ့ဆိတ်တွေပါ တောင်ပေါ်တက် ကုန် လိမ့်မယ်
နား လည်လား "
No.96. . ညှဉ်းဆဲလိုက်မယ်. .
မီးပြတိုက်သို့ လှေတစ်စင်း ကပ်လာသည် ၊လှေပေါ်မှ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ဒေါသထွက်နေသော အမူအရာဖြင့် စာပို့လုလင် ဆင်းလာသည် ၊
ထို့နောက် မီးပြတိုက်အမှုထမ်းအား ၎င်း၏ စာကို ပေးလိုက်သည် ၊ မီးပြတိုက်ဝန်ထမ်းကပြောသည် ၊
"နောက်တစ်ခါ ငါ့အတွက် စာလာပို့တဲ့အခါ အခုလိုမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးလုပ်လာတာတွေ့ရင် နေ့စဉ် ထုတ် သတင်းစာ တစ်စောင် စောင်
ကို ငါ တစ်နှစ်စာ မှာလိုက်မယ် ၊နားလည် လား ။"
No.97. .အသစ်ပေးပါ. .
ချူ ချာကို နိုင်ငံ ကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးလိုက် သည် ၊ နောက် -၂-ရက် ကြာသော အခါ ချူ ချာပြန်ရောက်လာပြီး ပတ်စပို့ အသစ်ထုတ်ပေးရန်
"ဘာဖြစ်လ်ို့ ပတ်စပို့ နောက်တစ်ခုလိုချင် ရတာလဲ "
"ချူချာ ဆေးလိပ်သောက်တယ်လေ "
No.98. .လူတို့၏စရိုက်. .
ဧည့်သည်အဖြစ် လာပုံလာနည်း အမျိုးမျိုး..
အင်္ဂလိပ် ----တုတ်ကောက်ဖြင့်လာသည် ။
ပြင်သစ် -----မယားငယ်နှင့်လာသည် ။
ရုရှား ------အရက်ပုလင်းနှင့်လာသည် ။
ဂျူး ---------မိမိ၏ဆွေမျိုးများနှင့်အတူလာသည် ။
အင်္ဂလိပ် -----တုတ်ကောက်ကိုင်ပြီးပြန်ထွက်သည် ။
ပြင်သစ် -------အိမ်ရှင်၏ဇနီးနှင့်ပြန်ထွက်သည် ။
ရုရှား --------မျက်နှာဒဏ်ရာနှင့် အိမ်ပြန်သည် ။
ဂျူး --------မိမိနှင့် မိမိဆွေမျိုးများအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများယူကာပြန်ထွက်သည် ။
အင်္ဂလိပ် -------မနေ့က ငါ့ရဲ့ အပြု အမူ, အပြောအဆို တွေ လူကြီးလူကောင်းဆန်ရဲ့လား ။
ပြင်သစ် --------အဲဒီ အချိန်မှာ ငါ့မိန်းမ ဘယ်သူနဲ့များ ရှိနေ ပါလိမ့် ။
ရုရှား ---------(မှန်ထဲ ကြည့်ကာ)ငါ့ကို ဘယ်သူများ ဆော်ပလော်တီးလိုက်ပါလိမ့် ။
ဂျူး ----------ဘယ်သူ့ အိမ်ကို အလည်သွား ရပါ့ မလဲ ။
လူချောလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ ရည်းစားအသစ်စက်စက်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။
သူ့အသဲလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်အောင်…ဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲလို့ အသည်းအသန်စဉ်းစားရပါတော့တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ထုပ်ပိုးပေးတဲ့အရောင်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူ့ညီမကလက်အိတ်ရသွားတယ်။
ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ် ညနေခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်သတိပြုမိလို့ပဲ။
မင့်ညီမက ချွတ်လို့စွတ်လို့လွယ်အောင် အဲ့ဒါကိုပဲ ၀ယ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။
အရောင်းစာရေးမကတောင် သူမလည်းဒါပဲ ၀တ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြချွတ်ပြသေးတယ်။
အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူမက အပေအစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်းအာမခံတယ်လေ။
ဒီတစ်ခါ ကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာ မြင်ချင်တယ်။ တွေ့ရင်တော့လား အထပ်ထပ်အခါခါနမ်းပစ်မိမှာပဲ။
လူနာတစ်ယောက်သည် သစ်ပင် ပေါ်တွင်ရောင်နေသည်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကအောက်မှနေ
ပြီး ဆင်းလာဖို့ ပြောနေသည်။
တစ်ခါတုန်းက အရမ်းအသားစာကျူးတဲ့ ဘီလူးကြီးတစ်ကောင်က တောအုပ်ကြီးအတွင်းမှာ ကျင်လည်နေတယ်တဲ့
တစ်နေ့ တော့ အဲဒီတောအုပ်ကြီးထဲကို ရသေ့တစ်ပါးက တရားလဲလာထိုင်ရော
ဘီလူးကြီးနဲ့ ထိပ်တိုက်ကိုတွေ့ တာပေါ့
အဲဒီအခါ ဘီလူးကြီးက ရသေ့ကိုစားမယ်လို့ ကျိန်းလဲဝါးရော
ရသေ့ကြီးက တရားပြလိုက်တယ်တဲ့ ရသေ့လဲတရားပြပြီးလဲပြီးရော ဘီလူးကြီးက
အသားမစားတော့ပါဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် တစ်လတစ်တော့ သွေးသောက်ချင်ပါတယ်တဲ့
ရသေ့ကြီးက ဒါမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆုတောင်းလား မင်းသူများအသက်ကိုမသတ်တော့ပါဘူးလို့ 
ကတိပေးရင် ငါဖြည့် ဆည်းပေးမယ်
ဒါကြောင့်မို့ သတိတော့ပေးလိုက်မယ်နော် ဆုတောင်းတိုင်းလဲမကောင်းပါဘူးဗျာ
- မင်းသားရဲ့ မိဘဖြစ်ရတဲ့ သူတွေက ကံမကောင်းတတ်ကြပါဘူး။မင်းသားငယ်စဉ်ဘ၀မှာ ရန်သူတွေ သတ်တာခံရပြီး မင်းသားက မိဘမဲ့ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
-ဒဏ်ရာရပြီး သေလုမျောပါး ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေဟာ အသက်ကိုရအောင်ရှူပြီး သူ့ကိုဘယ်သူသတ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ်ဖို့ စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးမှ (သေကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့) ခေါင်းကစောင်းကျသွားပါတယ်။
-သိုင်းပညာရှင်တွေဟာ ခေါင်မိုးတွေ၊ သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ ချွှေးလုံးဝမထွက်ဘဲ ပျံနိူင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာတော့ လမ်းလျှောက်ပြီး (ဒါမှမဟုတ်)
-မင်းသားသူရဲကောင်းတွေဟာ ပိုက်ဆံရဖို့ အလုပ်မလုပ်ကြပေမယ့် ၀ယ်စားတဲ့ အစားအစာတွေအတွက် ပေးဖို့ ရွှေတုံးငွေတုံး တွေတော့ သူတို့မှာ အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။
-တိုင်းပြည်ကဘယ်လောက်ကြီးကြီး၊ ဘယ်နေရာတေီမှာပဲရောက်နေနေ မင်းသားနဲ့ လူဆိုးတွေဟာ လမ်းမှာမကြာခဏ ဆုံလေ့ရှိပါတယ်။
-အတွင်းဒဏ်ရာတွေကုသရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်၊ ဒူးခေါင်းပေါ်မှာ လက်တွေတင်ပြီးရင် ခေါင်းကမီးခိုးတွေ ထွက်သွားတာနဲ့ ပျောက်ပါပြီ။
-သူတို့ဟာ အင်္ကျီလက်တွေ၊ ခါးပတ်တွေထဲမှာ ပစ္စည်းတွေအများကြီး(အထူးသဖြင့် ရွှေတုံး ၊ငွေတုံးတွေ) ထည့်နိူင်ကြပြီး ဘယ်တော့မှလည်း ပြုတ်မကျကြပါဘူး။
ခွေးကို နောက်ခြေနှစ်ချောင်းနှင့် ရပ်တတ်ရန် မိန်းမဖြစ်သူက သင်ပေးနေသည်ကို ကြည့်၍ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက သဘောမကျသော လေသံဖြင့်ပြောသည်။
"ဟေ့ ကြိုးစားပြီး သင်ပေးမနေနဲ့ ၊ဒီကောင်က ခေါင်းမာတဲ့အကောင်၊လိုက်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး"
"ရှင်ဘာမှ ၀င်မစွက်နဲ့ ၊ရှင်လည်း အစတုန်းက ကျွန်မစကားကို ဘယ်မှာနားထောင်လို့ လဲ"
ကိုမြသည် ကပ်ရပ်ခြံမှ ကိုဘလှကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်သည်။
"ဟေ့ ကိုဘ ၊ခင်ဗျားခွေးက ကျုပ်မွေးထားတဲ့ ကြက်ဖကို ကိုက်စားလိုက်ပါပကောဗျာ"
"ခင်ဗျား သတင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ၊ဒီကောင့်ကို ညနေစာ ကျွေးစရာ မလိုတော့ဘူး"
ဆရာဝန်။ ။ "အင်း...ခင်ဗျားရောဂါက နမိုးနီးယားပဲဗျ"
လူနာ ။ ။ "သေချာရဲ့ လားဆရာရယ်၊ဟိုတလောက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တသ်ယောက်ကို နမိုးနီးယားဆိုပြီးတော့ ဟိုဘက်ခန်းက ဆရာဝန်ကုလိုက်တာအဲဒီလူနာသေတော့ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ သေတာဗျ"
ဆရာဝန်။ ။ "အင်း...အဲဒါတော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဗျာ၊ကျုပ်ကပိုပြီးတော့သေချာတဲ့လူပါ၊ကျုပ်ကသာ နမိုးနီးယား လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် အဲဒီလူ နမိုးနီးယားနဲ့ ပဲ သေမှာပါ...
"ကျွန်မ ဆရာပေးတဲ့ ပိန်ဆေးသောက်တာ ၂လရှိပြီ ပိန်လည်းမပိန်လာပါလားရှင်"
"၁နေ့ ကိုခင်ဗျာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်လဲ??"
"ဆယ်ကြိမ်လေ...ဆရာက ထမင်းစားပြီးတိုင်း တစ်ခါသောက်လို့ ပြောထားတာလေ
103.Get from Emial
READ IT....IT'S FUN
ကိုယ်ပေးတဲ့ လက်စွပ်လေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိလား ... . . .
တစ်ခါတုန်းက ကောင်ကလေးတစ်ယောက်က သူ့ချစ်သူ ကောင်မလေးကို ချစ်သူသက်တမ်း
တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ ချစ်သက်လက်ဆောင် လက်စွပ်လေး တစ်ကွင်းကို
ကောင်မလေးရဲ့ လက်သူကြွယ်လေးမှာ လက်ဆောင်အဖြစ် ၀တ်ပေးပါတယ်။ သူ့ကောင်မလေးက
လက်စွပ်လေးတွေကို ချစ်တတ်ပုံရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမရဲ့
လက်ချောင်းလေးတွေမှာ လက်စွပ်လေး သုံးကွင်းလောက်
၀တ်ထားလေ့ရှိလို့ပါ။ကောင်လေးက သူ့ချစ်သူလေးကို ချစ်ရည်ရွှမ်းလဲ့နေတဲ့
မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ စိုက်ကြည့်ပြီး....."ကိုယ်ပေးတဲ့ လက်စွပ်လေးရဲ့
အဓိပ္ပါယ်ကို သိလား..." လို့ ကောင်မလေးကို ငြင်သာစွာ
မျက်စလေးချီပြီး....."သိတာပေါ့..." လို့ ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ရှက်စနိုးလေး
ပြန်ဖြေရှာပါတယ်။အဲဒီတော့ ကောင်လေးက သူ့ကောင်မလေးရဲ့အဖြေကို သူ့စိတ်ထဲမှာ
သူ့ဘာသာသူ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် "ချစ်သူစကား... ပျားသကာ
အလား... ဆိုသလိုပဲ" ကောင်မလေးရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားလေး
ကြားချင်တာကြောင့်...."ဒါဆို ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ... ပြော..." လို့ မေးပြီး
ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ကောင်မလေးရဲ့အဖြေဟာ သူ့အတွေးနဲ့ ထပ်တူမကျတဲ့အပြင် တည့်တည့်ကြီး
လွဲနေတာကြောင့် ကောင်ကလေးလည်း အဲဒီနေရာမှာတင် အသည်းတွေ တဗြန်းဗြန်း
ကွဲရှာပါတော့တယ်။ကောင်မလေးပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ အဖြေက သူမအတွက်တော့
တော်တော်လှတဲ့ အဖြေလေးပါ။ အဲဒါကတော့..."မရှိဝမ်းစာ၊ ရှိတန်ဆာ"
တဲ့....p.s. စာဖတ်သူတွေလည်း ဒီစာလေးကို ဖတ်မိပြီး ကိုယ့်ကောင်မလေးတွေကို
အဲဒီ့မေးခွန်းသွားမမေးမိစေနဲ့ဦးနော်... တော်ကြာ ဟိုကောင်လေးလို အသည်းတွေ
တစ်စစီ လိုက်ကောက်နေရဦးမယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဒီလိုဗျ.. ဘိန်စားနှစ်ယောက် ကဘုန်းကြီးကျောင်းအုတ်နံရံတစ်ခုမှာမှီပြီးတော့ဘိန်ရှုနေရင်းကနေ ပြသသနာကစတော့တာဘဲ အဲလိုနဲ့ ဘိန်စားနှစ်ယောက်ကဘိန်းရှုပြီးတော့ ဘိန်းမှိန်းမှိန်း နေတာပေ့ါဗျာ အဲဒီအချိ်န်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းက စွမ်းစားချိန်ရောက်တော့ တုန်းခေါက်ရော အဲဒါကို ဘိန်စားတစ်ယောက်က လန့်သွားတာပေ့ါ သူကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ ကျန်တဲ့ဘိန်းစားတစ်ယောက်ကလဲ သြော်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းစားချိန်ရောက်လို့ တုန်းခေါက်တာပါတဲ့ သူက ဒိလိုပြောလိုက်တော့ ခုနက လန့်သွားတဲ့ ဘိန်းစားက ဘာပြောတယ်ထင်လဲ ဒီဘုန်းကြီးတွေ သူများလုပ်စာကိုစားတာတောင်မှ တုန်းခေါက်စားတယ်ဆိုတော့တဲ့ ကိုယ့်လုပ်စာများ စားလို့ကတော့တဲ့ အမြှောက်နဲ့များပစ်စားမလားမသိဘူးတဲ့။